UKUHLELWA KWEGADI YOMTHI (IINDAWO ZOYILO LOMHLABA) - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba Ukuhlelwa kwegadi yomthi (iiNdawo zoYilo loMhlaba)
Ukuhlelwa kwegadi yomthi (iiNdawo zoYilo loMhlaba)
Nasi isikhokelo sokuhlela igadi yethu yomthi kubandakanya ukuba yintoni, iintlobo ezahlukeneyo, indleko kunye nemibono yoyilo lokuhombisa umhlaba. Ukuba igadi yakho iswele inkcazo, ukuhlengahlengiswa okungalunganga kunokuba sisityholo. Ngaphandle kwemida yohlobo oluthile, yinto nje yexesha ngaphambi kokuba igrabile ifudukele engceni kwaye ingca iqala ukukhula phakathi kwendlela yelitye oyibekileyo.
I-14 yemibhiyozo yesipho somtshato kuye
Ukuhlela lixesha lesigadi ngaso nasiphi na isisombululo kwingxaki yokufuduka kwezinto. Ngelixa iiplastikhi, izitena, kunye neenketho zesamente zifumaneka, enye yezona zinto zithandwa kakhulu ekuhleleni igadi yakho ngumthi.
Yintoni ukuHamba kweGadi yomthi?
Iingcamango ze-Wooden Edging Ideas
Uxinzelelo oluphathwe nge-Wood Garden Edging
Umqukumbelo weWood Garden
Ukujikeleza kweTimber Garden
Ukuhlelwa kweJard Wood Wood
Iindleko zeNgingqi yeeNkuni
Eyona Wood iyiNtloko yokuSebenzisa ukuHlela kweGadi
Ukujikeleza kwegadi eyenziwe ngomthi kungumqobo owakhiwe phakathi kweendawo ezimbini zegadi. Ingasetyenziselwa ukuhambisa iindlela, ukubamba i-mulch endaweni, okanye ukwenza iibhedi zokutyala. Izinto ezisetyenziselwa ukwakha ukujikeleza kwegadi yomthi ibizwa ngokuba ngumthi wokulungisa umhlaba.
Ngokwesiqhelo, iziqwenga ezininzi zeeplanga zokubekwa komhlaba zibekwa emseleni ojikeleze indlela, ibhedi, okanye inqaku legadi. Badityaniswe kwiimbombo besebenzisa braces, ukwenza isakhelo. Umsele ke uyagcwaliswa ngaphakathi, kushiyeke kuphela umphezulu womthi wokulungisa umhlaba ungatyhilelwanga.
Ngenxa yokuba ukujikeleza kwegadi eyenziwe ngomthi kungcwatyelwe phantsi komhlaba, ikukunxibelelana okusondeleyo nokufuma. Iinkuni ezinganyangekiyo zifunxa amanzi kunye neentsholongwane ezisuka emhlabeni.
Kungekudala, ukubola kuyabamba. Kwisithuba seminyaka emibini okanye emithathu, iiplanga zokwakha umhlaba ziya kufuna ukususwa zibekwe endaweni yazo. Umthi ophathwayo, kwelinye icala, unokugcina ukufuma ixesha elide-ukuya kuthi ga kwiminyaka esixhenxe okanye nakwishumi.
Qaphela ukuba 'ukunyangwa' akufani 'nokugqitywa'. Ukufaka idyasi ekhuselayo yebala okanye itywina elityeni kunganceda ukwenza umqobo okhusela umphandle womthi, kodwa ungangeni kumbindi womqadi.
Inkuni ezinyangiweyo ziye zafakwa imichiza ekhonza injongo ethile kunye notshintsho lweempawu zomthi. Ukujongwa komthi kunye nokuqina kweplastiki, abathengi bahlala bekhetha iinkuni ezidityanisiweyo ukugqiba iigadi zabo.
Eli nqaku licacisa umahluko phakathi kokukhetha ukuhlelwa kwegadi yomthi, kwaye kwabelwane ngezinye zezona zimvo zoyilo zaziwayo. Ikwagubungela iindleko zokufaka ukujikeleza kwegadi yomthi kwaye kubandakanya neengcebiso kunye neendlela zokwenza ngokwakho.
Eyona ndlela ikhawulezayo neyona ilula yokuhlela igadi isebenzisa imiqadi emide, ibekwe ngokuthe tyaba emseleni. Faka isiqwenga esinye, esincinci somthi womhlaba ukubonelela ngesithintelo esisezantsi phakathi kwebhedi yegadi nengca. Okanye, khetha umqadi obanzi kwaye otyebileyo ngenkangeleko ethe kratya.
Ukujikeleza kwegadi eyenziwe ngomthi kunokukhawulezisa inkqubo yakho yokunyamekela ingca. Ukujikeleza kobukhulu obaneleyo kubonelela ngomda wempazamo xa usebenzisa ii-mowers okanye i-trimmers, ukuze usebenze ngokukhawuleza ngelixa ugcina iibhedi zakho zeentyatyambo zikhuselekile.
Ezinye izimvo zokulungiswa kwegadi eyenziwe ngomthi zibandakanya ukubekwa kweengodo ezininzi zokuhlela umhlaba ngaphezulu komnye nomnye ukwenza udonga lwelog, okanye ukubeka imiqadi esikwe isikwere kwipateni yokungenelela kwindlu yefama.
Imithi yokugawula umhlaba nayo inganqunyulwa ibe ziingceba ezincinci kwaye ibekwe nkqo. Ukwahlula ukuphakama kwamaqhekeza kudala umdla kunye nefestile yempembelelo. Iibhloko ezomeleleyo zomthi eziphakame ngokufanayo zinokudlulisela ithoni engaphezulu kunye nesesikweni.
Unokuyipeyinta, uyichaphaze, okanye ukrobe imiqadi esetyenziselwa ukwenza igadi yakho yomthi ukuba ihlele ngokwezifiso iibhedi zakho zeentyatyambo kunye neendlela zokuhamba. Bona Okuninzi Izimvo zocingo lwegadi kweli phepha.
Jonga olu cingo lwegadi lomthi lujikeleze Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Imiqolo yentsimbi yokubiyela igadi encinci inokuthengwa ngezikhonkwane ukulungiselela ukufakwa ngokulula.
Umyezo isixhobo sokutyala ucingo ngebhokisi yeentyatyambo yeplanga ethe tyaba.
Uxinzelelo oluphathwe ngokhuni egadini luhlala lunyangwa ngesigcinakalisi esinceda amaplanga axhathise ukungunda, ukungunda kunye nezinambuzane ezinjengeentubi.
Eminye imithi eyenziweyo ikhuselwe ngemichiza ethintela ilangatye. Iinkqubo ezithile zinokulungisa iinkuni ezicociweyo zokuzisebenzisa elwandle, kodwa oku akuyomfuneko ekulungiseni imithi yeplanga.
Unokuba nexhala malunga nobukho beekhemikhali emithini. I-CCA, okanye iinkuni ezenziwe nge-arsenate ezenziwe ngomthi zafunyanwa zibangela iingxaki zempilo, ngakumbi ebantwaneni, kwaye azisavavanywa ukuba zisetyenziswe kwiindawo zokuhlala. I-CA (i-azole yobhedu) okanye i-ACQ (i-Alkaline Copper Quaternary) iphathwa ngomthi endaweni yayo.
Inkqubo yokulinganisa isetyenziselwa ukubonisa usetyenziso olufanelekileyo kwisiqwenga somthi esinyangiweyo. Le ithegi kumda webhodi okanye umqadi. Ukulungiselela iinjongo zokwakheka komhlaba, iplanga kufuneka lilinganiselwe unxibelelwano lomhlaba.
Ikhowudi yolu hlobo 'UC4'. I-UC4A ibhekisa kumthi olungele 'ukusetyenziswa gabalala', ngelixa i-UC4B ichaza ukuba umthi ulinganiselwe 'ukusetyenziswa komsebenzi onzima'. Nokuba yeyiphi eyamkelekileyo ukuba isetyenziselwe ukujikeleza umyezo wegadi.
Eyona nkxalabo inkulu uninzi lwabantu olunayo xa kufikwa kuxinzelelo oluphathwe ngokhuni luthintela imichiza ukuba ingangeni emoyeni nasemhlabeni obajikelezileyo. Oku kubaluleke ngakumbi kumakhaya anabantwana okanye izilwanyana zasekhaya, okanye apho kulinyelwa khona izityalo zokutya.
Izimvo zekhitshi ekhitshini
Amaplanga aphathwe nge-ACQ anokukhupha intwana yobhedu emhlabeni ngokuhamba kwexesha, kodwa ithathwa njengomngcipheko osezantsi kwimpilo yabantu, nokuba isetyenziselwa ukuphelisa iigadi zemifuno.
Jonga lo myezo wokhuni odibeneyo Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Yenziwe ubukhulu becala ngeplastiki, kodwa inezinto ezinje ngomthi, ukujikeleza kwegadi edityanisiweyo kuthengiswa kwimigca okanye kwimiqolo. Kubiza ixabiso eliphantsi kunokwakheka kwemithi yendalo kwaye kuhlala ixesha elide kakhulu.
Iimveliso ezintsha zokujikeleza umyezo weenkuni ziye zaphucuka kwinkangeleko kunye nokuthungwa kweemodeli ezindala. Uninzi ngoku lubandakanya izinto ezinje ngokunyusa ingqolowa yokulinganisa.
Umsele omile okwe-v usetyenziswa xa ufaka umqukumbelo wegadi yeplanga edityanisiweyo, kuba umbandela ubhityile kwaye awunakulinganiseka kumda wawo. Olu khetho longa iindleko lusenza kube lula ukwenza uyilo olugobileyo, ngenxa yokuthambeka kwayo.
Umqukumbelo wegadi yegadi wenziwe ngomthi wendalo, usikwe waba ngamaplanga okanye ngemiqadi. Umthi osetyenziselwa ukwenza ukujikeleza kwegadi yomthi unokunyangwa okanye unganyangwa.
Ubhityile, iibhodi ezibanzi zisetyenziselwa ukwenza imida ecocekileyo necekeceke ejikeleze iibhedi ezilungisiweyo okanye eziphakanyisiweyo. Imithi yokuma komhlaba inokuba nesikwere okanye iprofayile ejikeleziweyo. Inokude inyanzeliswe kwilog yombho.
Xa kufuneka uhlengahlengiso ukulandela igophe lebhedi yeentyatyambo okanye indlela yokuhamba, iibhodi ezincinci ze-'bender 'zinokuntywila emanzini zize zenziwe imiphetho yegadi yemithi egobileyo.
Ukuba ufuna ukufakela igadi yeenkuni ukuzihlela, uneendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Ngethamsanqa, zonke izinto oza kuzidinga zingathengwa kwiyadi yamaplanga okanye kwiziko lokuphucula ikhaya. Le projekthi inokugqitywa ngokulula nokuba yi-novice DIYer.
Okokuqala, khetha umbandela. Ngaba uza kusebenzisa iinkuni zendalo okanye zokwenziwa? Ukuba usebenzisa ukhuni lwendalo, ngaba luya kunyangwa okanye lunganyangwa?
Emva koko, misela ukuba ufuna ububanzi bakho bokuba banzi kangakanani. Ukujikeleza okubanzi kunokwenza ukuba kube lula ukucheba okanye ukucheba ingca ngaphandle kokubeka emngciphekweni iintyatyambo okanye imifuno yakho.
Ukujikeleza kweplanga emxinwa kunokudityaniswa kunye neebhodi zeebhendi zokwenza ukujikeleza okucekeceke kunye nokugoso ecaleni kwendlela yegadi, kodwa obu bubuchule obuphambili.
Bamba umsele emhlabeni obanzi kancinci kunesitiya somthi oya kuwufaka. Qiniseka ukuba emazantsi omsele ulingana.
Ubunzulu bomsele buxhomekeke kwinjongo yokuhlela. Ukulungiselela i-mulch, kuyacetyiswa ukuba ukuhlela kube ubuncinci iisentimitha ezintandathu ukuphakama, kunye nee-intshi ezine ngaphantsi komhlaba kunye nee-intshi ezimbini ngaphezulu komhlaba. Ukulungiselela igrabile okanye iindlela zamatye, umphezulu wokuhlela ngomthi kufuneka ube yi-intshi ye-intshi ngaphezulu kwenqanaba lomhlaba okanye ngaphantsi.
Beka imiqadi emseleni, usebenzisa iipleyiti ezikhulu ukudibanisa imiqadi emifutshane. Apho iiplanga ezimbini zakha ikona, sebenzisa isibiyeli sekona ukudibanisa. Gcwalisa umsele uze uwugungqise umhlaba.
Izinto ezisetyenzisiweyo ekuhleleni igadi ngomthi zichaza ukuba i-edging izakuhlala ixesha elingakanani kwaye kufuneka itshintshwe kangaphi. Kuya kulahlekisa ukuthelekisa imveliso ehlala iminyaka engama-20 kunye neyokuqala ukubola emva kweenyanga ezingama-20.
Ibhedi yomndilili ophakathi i-4 × 8 yeenyawo, efuna i-24 yeenyawo zemathiriyeli yokujikeleza ukwenza isakhelo esifanelekileyo. Esi sixa semithi esinganyangekiyo sinokufunwa malunga ne- $ 150.
Ukuphathwa kwemithi yokulungisa umhlaba kungabiza kancinci, kubize ama-200 eedola ukugubungela loo ndawo inye.
Umthi owenziweyo okanye odityanisiweyo awubizi mali ininzi, umndilili weedola ezingama-75 zokwenza umda kwibhedi yegadi yesi sayizi.
izihlangu zomtshato ezifanelekileyo
Umthi odibeneyo unokuhlala ukuya kwiminyaka engamashumi amabini ngaphambi kokufuna ukutshintshwa, okwenza ukuba ube lixabiso elifanelekileyo kwimali yakho. Ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini efanayo, kuya kufuneka ubeke endaweni yomthi ophathwayo uhlela ubuncinci kabini, ukonyusa iindleko zizonke malunga ne-400 yeedola.
Ukuba unamathela kwimithi engaphendulwanga kwaye uyitshintshe rhoqo emva kweminyaka emibini, iziphumo ezifanayo ziya kukuxabisa i-1,500 yeedola kwisithuba seminyaka engama-20.
Ngelixa iinkuni ezidityanisiweyo ngokucacileyo lolona khetho lusebenzayo, abantu abaninzi bakhetha ukubonakala kwemithi yendalo. Ukukhetha iinkuni ezinyangiweyo ngaphezulu kweenkuni ezinganyangekiyo kunokubiza ngaphezulu ngaphambili, kodwa ukonga ixesha elide ngaphezulu kweenkuni ezinganyangekiyo ngaphezulu kokwenza umahluko. Igadi isebenzisa s iinkuni ezincinci ucingo lokubiyela njengomda wegadi.
Ezona mithi zidumileyo zisetyenziselwa ukwenza iiplanga umhlaba ngumthi obomvu nomsedare, njengoko zinendawo yazo yokubola enganyangekiyo.
IPine ikwayindlela eyaziwayo kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Xa inyangwa, inokuhlala ukuya kuthi ga kwiminyaka esixhenxe. Ipine enganyangekiyo inobomi obufutshane obunokusetyenziswa.
Ukuhlala ixesha elide kakhulu kwegadi, imicu yeenkuni edibeneyo yeyona ilungileyo. Benza ngokulula ngaphandle kokunyanga ukhuni oluqinileyo, oluhlala ukuya kuthi ga kwiminyaka engama-20 ngaphandle kokuthotywa.
Kukho iinkqubo ezahlukeneyo ezinokukunceda ukucwangcisa kunye nokuyila igadi yakho yangasemva. Ndwendwela eli phepha ukuze ubone umphezulu isoftware yoyilo lobume bomhlaba ukusebenzisa.
izipho ezikhethekileyo zeminyaka engama-50 zomtshato
U-erica mena uthoba wow utshatile
izimvo zangoku zangaphantsi
ubungakanani boqobo lomnyango
rosie huntington-whiteley indandatho yokuzibandakanya